कोरोनाबाट प्रभावित हुँदा शरीरमा यस्ताे परिवर्तन आउँछ – Karnalisandesh
कोरोनाबाट प्रभावित हुँदा शरीरमा यस्ताे परिवर्तन आउँछ
प्रकाशित मितिः २९ माघ २०७६, बुधबार १२:१९ February 12, 2020
काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग डाक्टरको लडाईं कुनै अपरिचित दुश्मनविरुद्ध खेलिएको युद्धसरह हो। यसले तपाईंको शरीरमा कसरी हमला गर्छ ? संक्रमणपछि मानव शरीरमा कस्ता लक्षण देखिन्छन् ?
कस्ता व्यक्ति गम्भीर रुपमा बिरामी हुने वा कस्ता व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ रु र तपाईंले यसको उपचार कसरी गर्ने ? चीनको ऊहान शहरका अस्पतालमा यो महामारीको उपचार गराइरहेका डाक्टरको समूहले अब यी प्रश्नको जवाफ दिन सुरु गरेका छन्।
कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका १ सय ३८ बिरामीको उपचारको विस्तृत जानकारी फेब्रुअरी ७ तारिखमा जर्नल अफ द अमेरिकन मेडिकल असोसिएसन ९जेएएमए० मा प्रकाशित भएको थियो। तीमध्ये लगभग सबै बिरामीमा ज्वरो, थकान र सुख्खा खोकी देखियो। यसका साथै, प्रत्येक तेस्रो बिरामीले मांशपेशी दुखेको र सास फेर्न गाह्रो भएको बताए। साथै, १० प्रतिशतमा रिँगटा र झाडा लाग्नेजस्ता सामान्य लक्षण देखियो।
२२ वर्षदेखि ९२ वर्ष उमेर समूहका बिरामीलाई जनवरी १ देखि २८ तारिखमा झोङ्नान अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। ‘रोगबाट संक्रमित बिरामीको औसत उमेर ४९ देखि ५६ वर्ष होे,’ जेएएमएले भन्यो। ‘बच्चामा निकै कम संक्रमण देखिएको छ।’
कतिपय केस साधारण देखिएता पनि सबै बिरामीमा निमोनिया भने देखिएको जेएएमएले बताएको छ।कति बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भएपछि आइसीयूमा नै राखेर उपचारसमेत गर्नुपर्यो । गम्भीर रुपमा बिरामीमध्ये धेरैजसो दीर्घ रोगी हुन्।
१ सय ३८ बिरामीमध्ये ६ जनाको मृत्यु भएको छ। यसले ४.३ प्रतिशत मृत्युदर देखाउँछ। यद्यपि, संक्रमण सुरुवाती अवस्थामा भएकोले यो दरमा परिवर्तन हुनसक्ने पनि बताइएको छ।
साथै, जनवरी २४ मा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने पहिलो ९९ बिरामीको उपचारको विस्तृत जानकारी लासेन्ट मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित गरिएको थियो।
ऊहानको जिन्यिन्ता अस्पतालमा जुन ९९ बिरामी ल्याइएको थियो त्यसमा निमोनियाका लक्षण थिए। यी बिरामीमा फोक्सोको समस्या देखिएको थियो र फोक्सोको त्यो स्थान जहाँबाट अक्सिजन रगतमा प्रवाह हुन्छ त्यहाँ पानी भरिएको थियो ।
अन्य लक्षण थिए
५ लाई टन्सिलको समस्या थियो।
मृत्युका सुरुवाती घटना
कोरोना भाइरसद्वारा संक्रमित जुन दुई बिरामीको पहिलो मृत्यु भयो, उनीहरु स्वस्थ देखिएका थिए। उनीहरुलाई लामो समयदेखि चुरोटको लत थियो र यसैकारण उनीहरुको फोक्सो कमजोर भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
६१ वर्षका जुन व्यक्तिलाई अस्पताल ल्याइएको थियो, उनी निमोनियाको लक्षणबाट ग्रस्त थिए। उनलाई सास फेर्न निकै समस्या भइरहेको थियो। तपाईंले यसलाई यसरी पनि बझ्न सक्नुहुन्छ–ती व्यक्तिको फोक्सोले शरीरलाई जिउँदो राख्न आवश्यक अक्सिजन आपूर्ती गर्न सकिरहेको थिएन।
भेन्टिलेटरमा राख्दासमेत ती व्यक्तिको फोक्सोले काम गर्न सकेन जसका कारण उनको मुटुले काम गर्न बन्द गर्यो। अर्का व्यक्ति ६९ वर्षका थिए र उनलाई पनि सास फेर्न समस्या भएको थियो।
उनलाई कृत्रिम रुपमा अक्सिजन दिने कोसिस गरियो तर त्यो सफल हुन सकेन। उनीहरुको रक्तचाप खस्किएपछि निमोनियाले ज्यान लियो।
ऊहानको हुआनान सीफूड मार्केटमा पाइने समुद्री जीवलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण मानिएको छ। ऊहानको जिन्यिन्तान अस्पतालमा ल्याइएका ९९ जना व्यक्तिमध्ये ४९ व्यक्तिको यो सीफूड मार्केटसँग सम्बन्ध थियो।
४७ जना व्यक्ति हुआनान सीफूड मार्केटमा या त म्यानेजरको रुपमा काम गरिरहेका थिए वा त्यहाँ पसल चलाइरहेका थिए। संक्रमित हुने व्यक्तिमध्ये दुई व्यक्ति खरिदकर्ता थिए।
प्रभावित व्यक्तिमा अधवैंसे बढी
९९ बिरामीमा धेरैजसो अधवैंसे थिए। तीमध्ये ६७ पुरुष थिए र बिरामीको औसत उमेर ५६ वर्ष थियो। यद्यपि, ताजा आँकडाका अनुसार कोरोना भाइरसबाट संक्रमित स्त्री, पुरुषबीच धेरै फरक छैन। चीनको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सनका अनुसार ६ पुरुषको तुलनामा पाँच महिलामा यसको संक्रमण पाइएको छ।
कोरोना संक्रमणका कारण पुरुष गम्भीर रुपमा बिरामी हुने र उनीहरुलाई अस्पतालमा भर्ना गराउनुपर्ने स्थिती सृजना हुनसक्छ। सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले गर्दा पुरुष थप संक्रमित हुनसक्छन्।
जिन्यिन्तान अस्पतालका डाक्टर ली झांग भन्छन्, ‘कोरोना भाइरसको संक्रमणको आशंका महिलामा कम हुन्छ किनभने उनीहरुमा एक्स क्रोमोजोम र सेक्स हर्मोनका कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता बलियो रहन्छ।’
जो पहिले नै रोगी थिए
९९ बिरामीमध्ये धेरैलाई पहिले नै कुनै न कुनै रोग लागेको थियो। जसका कारण कोरोनाबाट संक्रमित हुने खतरा उनीहरुलाई धेरै थियो। डाक्टरले यसलाई कमजोर प्रतिरोधी क्षमताको नतिजा बताइरहेका छन्।
४० बिरामीको मुटु कमजोर थियो वा उनीहरुको रक्त वाहिनीमा समस्या थियो। उनीहरुलाई मुटु रोग थियो र पहिले नै हृदयघात भइसकेको थियो।
१२ जनालाई मधुमेहको समस्या थियो।